‘क्याप्टेन किलर’ सन्दीप ! | Hamro Khelkud
‘क्याप्टेन किलर’ सन्दीप !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने विग ब्यासमा शानदार प्रर्दशन गर्दै मंगलबार राती बंगलादेशतर्फ लागेका छन् ।
मंगलबार राति मेलबर्न विमानस्थलबाट ढाकाका लागि प्रस्थान गरेका सन्दीपले आफ्नो सामाजिक संजालमा फोटो राख्दै मेलबर्न स्टार्सलाई आगमी खेलको लागि शुभकामना समेत दिएका छन् । सानदार प्रर्दशन गरेका सन्दीपले विग ब्यास भन्दा पहिला बंगलादेश प्रिमिएर लिगमा सिलहेट सिक्सर्ससँग सम्झौता गरेको कारण बंगलादेश गएका हुन् । सिलहेट सिक्सर्सबाट सन्दीपले जनवरी २३ सम्म बंगलादेश प्रिमियर लिग खेल्ने छन् । त्यसपछि उतैबाट २४ जनवरीमा युएईसँग हुने समान तीन ओडीआई र टी २० को लागि दुबईतर्फ लाग्ने छन् ।
यस्तो रह्यो विग ब्यासमा सन्दीपको प्रर्दशन
सन्दीपले आफु कुन स्तरको बलर हुन भन्ने विश्व क्रिकेटलाई विग ब्यासमा पनि प्रमाणित गरेर देखाए । यसभन्दा अघि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) ,क्यानडा प्रिमियर लिग, क्यारेबियन प्रिमियर लिग, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग र यूएईको टी–१० लिगमा पनि सन्दीपले आफुलाई प्रमाणित गरिसकेका थिए । मेलबर्न स्टारबाट विग ब्यास खेलेका सन्दीपले ४ खेलमा ८ विकेट लिन सफल भए । जस्मा चारै टिममा कप्तानलाई आफ्नो गुग्लीको पासोमा फसाए ।
सन्दीपले बिग ब्यासका ४ खेलमा १६ ओभर बलिङ गर्दै १ सय ९ रन खर्चे । उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका सन्दीपले लिएका ८ विकेट मध्य चार विकेट विपक्षी कप्तानका थिए । सन्दीपले सिड्नी थन्डरविरुद्ध डेब्यूमै दुई विकेट लिदै सनसनि मच्चाए । डेब्यूमा सन्दीपले सिड्नीका कप्तान सेन वाटसन र क्यलम फर्गसनलाई आउट गरे । उक्त खेलमा सन्दीपले ४ ओभरमा ३६ रन खर्चिए ।
दोस्रो खेलमा सन्दीपले होबार्ट हरिकेन्सविरुद्ध उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । कप्तान मयाथ्यू वेड सहित एलेक्स डूलन र बेन मेक्डरमटलाई सन्दीपले पेभिलिएन फर्काए । तेस्रो खेलमा सन्दीपले झनै घातक बलिङ गर्दै सिड्नी सिक्सर्सबीरुद्ध ४ ओभरमा मात्र १८ रन खर्चेर २ विकेट लिए । सिड्नीका कप्तान मोइशेस हेनरिक र टम करन सन्दीपको शिकार बने । चौथो खेलमा सन्दीपले मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्ध मध्यम प्रर्दशन गर्दै ४ ओभरमा ३१ रन खर्चेर १ विकेट लिए । सन्दीपले कप्तान टम कुपरलाई पेभेलियन फर्काएका थिए ।
११ औं संकरणमा साविक दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट व्यवसायिक क्रिकेट यात्रा थालेका सन्दीपले विश्वका चर्चिच फेन्चाइज टी–२० लिगमा आफ्नो राम्रो छाप छोडेका छन् । छाप मात्र होइन नाम र दाम पनि राम्रो कमाइरहेका छन् । साच्चै सन्दीपले भने जस्तै उनको राम्रो प्रर्दशनले अन्य प्रतिभाशाली नेपाली खेलाडीहरुको लागि पनि विदेशी व्यवसायिक लिग खेल्न अब बाटो धेरै सहज बनेको छ ।